Generator-ka Korontada dhaliya oo lagu Rakibay Wales inuu yahay Mid Taariikhi ah | Cusbooneysiinta Cagaaran
Matoorkii ugu horreeyay ee koronto dhaliya ayaa yimid
Manuel Ramirez | | Tamarta biyaha badda, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Maanta ilo kale oo nadiif ah oo tamar nadiif ah ayaa muhiimad weyn leh. Tamarta daadka ayaa leh awood aad u weyn taas oo ku dhex dhuumata baddeena iyo tan weli laga faa'iideysan si sax ah.
Soo saaraha ugu horreeya ee koronto-dhaliye noocan ah ayaa lagu soo bandhigay Wales dadaal badan oo taxane ah si loo yareeyo qiiqa kaarboon ee UK. Awood dhaliyahaan wuxuu ku shaqeyn doonaa tijaabooyin 12-bilood ah Ramsay Sound, Pembrokeshire. Awoodda uu soo saaray aaladda bandhigga ayaa ah 400 kiilow, oo la rakibi doono toddobaadyo gudahood, waxaana loo adeegsan doonaa in lagu koronto 100 guri oo u dhow.
Tidal Energy Ltd waxay sheeganeysaa inay leedahay shirkadda DeltaStream waxay lahaan doontaa muhiimada weyn arimahan tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Agaasimaha shirkadda Martin Murphy ayaa sheegay in soo bandhigida matoor-dhaliyehani ay calaamad u tahay guul muhiim u ah warshadaha tamarta hirarka ee Wales: 'Mashruucan loogu talagalay Wales, oo marka laga reebo soo bandhigida hamigeenna markay tahay tamar nadiif ah, waxay sidoo kale u keeni doontaa fursado muhiim ah dadka aagga iyo ganacsiyadooda«.
Matoor dhaliyaha ugu horreeya wuxuu noqon doonaa kan ugu horreeya ee 9 ka badan ee ay qorsheynayaan inay raacaan at St. Davids Head ee Pemrokeshire si loo sameeyo shabakad soo saarta 10 megawatts oo awood ah. DeltaStream miisaankeedu wuxuu ka badan yahay 150 tan, cabirkiisuna waa 16 x 20 mitir. Waxay leedahay 3 marawaxado lakab ah oo isku laaban oo ku xiran matoor koronto dhaliye oo jaangooyada lafteedu waxay samaysaa saddexagal.
Mashruucan waa la kabay £ 8 milyan oo ka mid ah lacagaha Midowga Yurub. Marka la gaaro 2035, tamarta noocan ah ayaa la saadaaliyay inay ku dhowdahay £ 6100 bilyan oo dhaqaalaha Ingiriiska ah oo abuureysa in ka badan 20000 oo shaqo.
Fiidiyowga aan ka soo qaadanno khadadkaas tus sida uu koronto-dhaliyuhu u shaqeeyo tamarta daadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta biyaha badda » Matoorkii ugu horreeyay ee koronto dhaliya ayaa yimid
Hindiya gudaheeda, bay'addu waxay u hurtay koritaan
Unugyada Photovoltaic ee ranjiga lagu buufiyo